Tababare Guardiola oo Aguero u sheegay in markuu go’aansado uu isaga tegi karo Manchester City – Gool FM
Tababare Guardiola oo Aguero u sheegay in markuu go’aansado uu isaga tegi karo Manchester City
Haaruun October 22, 2016
(Manchester), 22 Okt 2016 – Iyadoo Macallinka kooxda Manchester City, Pep Guardiola uu Weeraryahankiisa Kun Aguero uu ka tuuray liiska safka hore ee City kulankii Barcelona ee UEFA Champions League ayaa waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in xiisad hoose ay ka dhex aloonsan tahay tababaraha iyo dhaliyaha Argentina.
Inkastoo Guardiola uu shir jaraa’id ku sheegay in Aguero uu yahay mustaqbalka kooxda iyo qorshihiisa fog haddana warbaahinta Ingiriisku waxay tilmaamaysaa in hadalkaasi laga dhedhensanayo in khilaaf u dhexeeyo macallinka iyo Aguero.
Pep waxa uu horey safka hore ee Manchester City uga tuuray Yaya Toure iyo Goolhayihii ugu kulan safashada badnaa City ee Joe Hart kaas oo markii dambe isaga tegay kooxda kuna biiray Torino.
Waxaa sidoo kale safka hore uusan ku soo darin tababare Guardiola kulankii Barcelona daafaca kooxda Man City, Vincent Kompany kaasoo uu xusay Guardiola inuusan caafimaadkiisu taam ahayn.
“Waxaan filayaa inaan qaatay go’aanka qorshahayga, qorshahayguna waa in Aguero iyo Kompany ay qayb ka yihiin mustaqbalka kooxda Manchester City” ayuu yiri Guardiola oo intaa raaciyay;
“Markii Sergio Aguero uu go’aansado inuu ka tago Manchester CIty waa uu bixi karaa, balse Kompany diyaar uma uusan ahayn kulankii Barcelona”.
Aguero (Man City) iyo Messi (Barcelona) oo intay afka gacanta saarteen si hoose wax isugu sheegaya kulankii Man City iyo Barcelona 0-4
Maxay tahay sababta heshiis kordhinta Neymar looga hor marsiiyay Messi iyo Suarez?
Edin Dzeko oo doortay 11-kii ciyaaryahan ee ugu fiicnaa oo uu ka garab ciyaaray… (Lampard iyo Totti oo hoggaaminaya)